Fianarana milina - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Analytics
Mianatra ny milina dia fanao amin'ny fandalinana data izay manamboatra ny maodely famakafakana. Ny milina fianarana izay mianatra tsy tapaka ny hitazonana ny asany ho marina sy ny fahitana hatrany dia marina fianarana milina rafitra. Ny angon-drakitra dia ampidirina ao amin'ny milina fianarana miaraka amin'ny hetsika sy ny hetsika tsy misy hetsika ary avy eo mandeha ho azy ilay asa nefa tsy mila fanelingelenana ataon'ny olona na amin'ny tanana. Mianatra ny milina dia namela solosaina hahita fomba fijery miafina, amin'ny alàlan'ny algorithman izay mahazo imbetsaka amin'ny data omena azy ireo, nefa tsy voarindra mazava tsara hoe aiza no hitadiavana. Mianatra ny milina afaka mamoaka paikady sy vokatra vaovao amin'ny rafitra samihafa ao anatin'izany ny IT, ny fahasalamana, ny logistika, ny angovo ary koa ny fanabeazana. Ny haavon'ny fahombiazana tsy nisy toy izany dia ho tratra amin'ny rafitry ny fandraharahana amin'ny algo's self-fianarana, ary amin'ny sehatra manokana, ny gadget marani-tsaina dia hitarika antsika amin'ny zava-drehetra ary hanampy hanamora ny fiainantsika. Mianatra ny milina dia siansa iray izay tsy vaovao velively fa mahazo vahana vaovao izao.
Mpamolavola fianarana milina
Fanamby iray mihodinkodina eo an-jorony ny fahaizan'ireto milina ireto tena afaka miatrika ny angon-drakitra tsy voarindra sy voarindra ary amin'ny fisian'ireo algorithma manara-penitra. Ary raha manao izany izy ireo dia tsy ho azo eritreretina ny valiny. Azontsika atao ny maminavina ny haavon'ny fanovana izay hitranga, ny tena fanovana dia homarihina. Fa izany rehetra izany dia tena mitaky fotoana be dia be hanaovana.
Mianatra ny milina tsy dia toy ny taloha intsony ny androany, noho ireo haitao informatika vaovao. Satria ny modely dia miharihary amin'ny angona vaovao, ny lafiny iterative an'ny fianarana milina dia tena ilaina tokoa satria afaka mampifanaraka tsy miankina amin'izy ireo izy ireo. Izy ireo dia mamokatra valiny azo antoka ary azo ianteherana amin'ny alàlan'ny fianarana avy amin'ny fanisana taloha nomena azy ireo. Mianatra ny milina dia teraka tamin'ny hevitra fa ny solosaina dia manana fahaizana mianatra nefa tsy voarindra ho an'ny asa manokana hiasa, izany no fanekena lamina ary ny mpikaroka dia mamorona fomba hahitana raha afaka mianatra avy amin'ny angona ny solosaina amin'ny alàlan'ny fahaizana artifisialy. Nahatonga ny olona liana indray ny olona fianarana milina toy ny analyse Bayesian ary angona fitrandrahana noho ny anton-javatra vitsivitsy toy ny fitahirizana angon-drakitra takatry ny saina, ny fanodinana kajy matanjaka sy mora kokoa ary ny fitomboan'ny karazana angona misy. Ireo zavatra rehetra ireo dia nahafahana nanangana modely ho azy sy haingana izay afaka mamakafaka angon-drakitra sarotra kokoa sy lehibe kokoa ary manome valiny marina sy haingana kokoa amin'ny ambaratonga lehibe raha ilaina izany. Amin'ny alàlan'ny famoronana modely mazava tsara, ny orinasa sy ny fikambanana dia manana vintana tsara hamantatra ireo fotoana mahasoa sy mahomby ary manamaivana ny loza mety hitranga. fianarana milina singa manan-danja amin'ny indostria fototra.
Mianatra ny milina manamora ny rafitra kognita mba handraisana anjara, hisaintsaina ary hianatra miaraka amintsika amin'ny fomba manokana sy voajanahary. Eritrereto ny varotra tahiry, ny tolo-kevitry ny sarimihetsika Netflix, ny doka amin'ny Internet izay mipoitra mifototra amin'ny fahazarantsika mikarokaroka — ireo no ohatra rehetra amin'ny fomba fianarana milina dia manampy antsika hijery izao tontolo izao amin'ny fomba mahery sy mamorona. Talohan'izay, ny kihon-dalana teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona dia ny revolisiona indostrialy izay nahafahan'ny indostria namorona asa bebe kokoa amin'ny maha-vokatra kokoa sy mampiakatra ny fari-piainana ankapobeny. anio, fianarana milina dia revolisiona iray hafa hatrehin'izao tontolo izao. Eo an-dalan'ny automation sy fahaizana artifisialy ho mpilalao fototra ary raha tsara ny zavatra atao, fianarana milina dia hanampy ireo orinasa hampitombo ny orinasany ary hamolavola hevitra avy hatrany. Toy ny ho an'ny Revolisiona Indostrialy, ny singa fototra amin'ny fianarana milina dia fiaraha-miasa- mila mpiasa mahay kokoa isika miara-miasa amin'ny dingana mahomby izay manome vokatra tsara. Ny mpiasa resahina eto dia manana injeniera data, architects IT, mpampiasa orinasa, mpahay siansa momba ny data, angona fitrandrahana manam-pahaizana, mpitantana ny rafitra, mpanatanteraka, mpamorona, sns.
Fantatsika tsara ny fianarana milina fampiharana izay mandeha eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Nandritra ny fotoana ela, ny algorithms ny fianarana milina Efa nisy teo aloha fa ny novolavolaina vao haingana dia ny fahaizana mampihatra ho azy ny kajy matematika sarotra amin'ny angona lehibe, haingana sy miverimberina. Iray amin'ireo ohatra efa mahazatra antsika ny fiara Google mitondra tena, izay nalaza be ary mifototra amin'ny fianarana milina. Izy io dia manana ny endri-javatra rehetra amin'ny fiara maoderina mitambatra toy ny adaptive cruise control, parking ary mpanampy navigator, fanehoan-kevitra ary mpanampy amin'ny lalamby izay mahatonga azy ho akaiky ny fiara miasa mahaleo tena tanteraka. Tolo-kevitra an-tserasera ihany koa ny tolotra toa an'ireo avy amin'ny Netflix sy Amazon, fisavana hosoka sy fampifangaroana fianarana milina miaraka amin'ny famoronana fitsipi-pitenenana mba hahafantarana izay lazain'ny mpanjifa momba anao ao amin'ny Twitter, Nanotronics, izay manamboatra mikraoskaopy optika ho an'ny fanaraha-maso nohatsaraina, Rethink Robotics mampiasa izany mba hanatsarana ny hafainganam-pandehan'ny famokarana sy hampiofana ny sandriny robotika, hampitombo ny fahamarinan'ny fizarana mpanjifa, maminavina ny lanjan'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainany. , fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa iray ao amin'ny app, ny fijerena ny fomba fiantsenan'ny mpanjifa, ny fanombanana ny loza mety hitranga amin'ny fahasalamana, ny fanatsarana ny fikarakarana manokana, ary ny fizahana aretina amin'ny marina kokoa dia fanoharana isan'andro. fianarana milina.
Tsara fianarana milina Ny rafitra dia noforonin'ny algorithms fototra sy mandroso, scalability, fahaiza-manao fanomanana data, modely amin'ny ensemble sy automatique ary dingana miverimberina. Mianatra ny milina vao haingana dia be ny vaovao noho ny fandrosoany amin'ny "fianarana lalina” izay ahitana ny fandresen'i AlphaGo malaza be an'i Go grandmaster Lee Sedol sy ireo vokatra vaovao manaitra hafa manodidina ny fandikana milina sy ny fanekena sary. Mianatra ny milina mandany angon-drakitra be dia be, mamela heloka kokoa amin'ny fanovana teboka na mari-pamantarana ary manohana ny fahasarotana sy ny fiovaovana bebe kokoa. Ny vokatra vokarina miaraka amin'ireo dingana ireo dia azo ampiharina amin'ny sehatra maro samihafa, toy ny rafitra analyse, rahona computing, tambajotra edge ary rafitra tafiditra. Fiovana dingana iray avy amin'ny vanim-potoana iray izay nivezivezena tamin'ny sehatra teknolojia indrindra ho amin'ny vanim-potoanan'ny saina, izay ahafahan'ny hevi-baovao entin'ny fandraharahana. Mianatra ny milina, IoT sy AI dia karazana mifamatotra. IoT dia mifameno tsara fahaizana artifisialy raha ny momba ny informatika amin'ny fotoana tena izy. Vetivety dia hosoloina milina mandeha an-tongotra ny olombelona ka tsy ho hendry noho isika. Ireo milina dia efa nanomboka nivezivezy tao amin'ny orinasa amin'ny tanjona maro samihafa ary amin'ny ho avy dia ho hitantsika ny onjam-panovana mekanika izay mampita ny fiainantsika isan'andro koa. Ireo dinamita olombelona ireo dia hanova ny fomba fijerintsika ny fiainana amin'ny alàlan'ny fananganana fahatsapana avy amin'ny angona voarainy sy amin'ny fomba izay tsy vitan'ny olombelona mihitsy. Midika izany fa ny milina dia tena hihoatra ny herin'ny olombelona saika ny zava-drehetra izay miteraka fiovan'ny fizotrany, ny fitehirizana ny vidiny ary ny ambaratonga mandeha ho azy matanjaka kokoa. Ny rafitry ny sary sy ny feo dia hanaiky ny isam-batan'olona amin'ny fantsona maro samihafa ary araka ny fanadihadiana natao dia hanana milina marani-tsaina betsaka kokoa noho ireo mpiasa ireo orinasa mandroso haingana indrindra.
Modely an'ny Developers ML
Voalohany indrindra dia misy karazana telo samihafa fianarana milina izay fanaraha-maso, tsy misy fanaraha-maso, ary fanamafisana ny fianarana. Ireo no voafidy arakaraka ny asa ho vita sy ny fahatsoran'ny dingana. Ao amin'ny fianarana an-tsakany sy an-davany, ny algorithm ianarana dia efa nomena ny valiny raha mamaky ny angona izay valiny marina ho an'ny teboka data tsirairay dia voamarika mazava tsara rehefa manofana ny maodely. Izy io dia mikasa ny hahita ny fifandraisana fa tsy ny mahita ny valiny mba hahafahany maminavina na manasokajy tsara ireo teboka angon-drakitra rehefa manomboka ireo teboka angona tsy voatendry. ahon Fianarana tsy misy fanaraha-maso, tsy omena ny valiny mandritra ny fiofanana ny algorithm ary ny soatoavina dia mitoetra ao amin'ny fitadiavana fifandraisana sy lamina. Izy io dia mikendry ny hahita fifandraisana misy dikany eo amin'ireo teboka angona. Ny karazany farany dia ny fianarana Reinforcement izay mifangaro eo anelanelan'ny fianarana arahi-maso sy tsy misy mpanara-maso. Mila fifamatorana amin'ny tontolo iainana ary ampiasaina hamahana olana sarotra kokoa noho ny roa teo aloha. Vitsy ny ohatra malaza dia ny backgammon, poker, ary ny Go, izany no lalao lojika ary angon-drakitra omen'ny tontolo iainana mba hamela ilay mpitsabo hamaly sy hianatra samirery.